Voasambotry ny polisy teny Andravoahangy : mampiasa sabatra sy sakay ilay mpanendaka raindahiny - ewa.mg
News - Voasambotry ny polisy teny Andravoahangy : mampiasa sabatra sy sakay ilay mpanendaka raindahiny
Tra-tehaky ny polisy avy ao amin’ny
boriborintany fa­havalo, ny alarobia teo tokony ho tamin’ny 11 ora
sy sasany alina ny jiolahy iray avy nanendaka. Vaky nandositra
anefa ireo andian-jiolahy vao nahita ireo mpitandro filaminana.
«Nitondra moto ny iray tamin’izy ireo ka io no tra-tehaky ny polisy
raha tafaporitsaka kosa ny namany», hoy ny fanazavan’ny
polisim-pi­renena, loharanom-baovao. Fan­tatra fa avy nanendaka
mpivady tetsy Manjakaray tamin’ny moto izy sy ny na­many. Niaraka
tamin’ny fitaovam-piadina toy ny sabatra sy ny sakay. Ireo
fitaovam-piadiana voatanisa kosa, lasan’
ireo namany tafatsoka, hoy hatrany ny fanazavana voaray. Naman’ny
jiolahy atao hoe Raleva ilay olon-dratsy ary nambarany ny misy azy.
Raikitra, araka izany, ny fitadiavana ilay jiolahy ka tratra teny
Andravoahangy ambony, ny alakamisy teo tokony ho tamin’ny 02 ora sy
30 mn ralehilahy. Mbola tratra niaraka tamina moto halatra ihany
koa izy. Voalaza fa isan’ireo andian-jiolahy mpanendaka miaraka
amin’ny sabatra eny Manjakaray i Raleva sy ny namany. Manana
fitoriana azy avy avokoa ny polisin’ny boriborintany miisa telo.
Isan’ izany ny kaomisarian’ny boriborintany fahatelo, fahenina ary
fahavalo miampy ny SUT eny Tsaralalana.
Ankoatra izay, voasambotra ihany koa ny tovolahy iray 21 taona
mpanendaka sady mpangaron-paosy eny Nani­sana. Fantatra ihany koa
fa mpifoka rongony 11 isa voasambotry ny polisy teny Man­jakaray,
ny herinandro lasa teo. «Izao no atao dia hoentina miady amin’ireo
asan-jiolahy eny amin’ny faritra Manjakaray sy ny manodidina iny»,
hoy hatrany ny polisim-pirenena.
L’article Voasambotry ny polisy teny Andravoahangy : mampiasa sabatra sy sakay ilay mpanendaka raindahiny a été récupéré chez Newsmada.
Manamafy ny fanaraha-maso sy fitsikilovana eny amin’ny seranam-piaramanidina ny mpiasan’ny fadintseranana. Ny 21 novambra teo, Malagasy efatra tratran’ny ladoany nitondra vola vahiny 109.300 euros, na 448.130.000 Ariary. Mpandeha iray, nahitana 19.000 euros ; iray hafa, nisy 49.850 euros ; iray namany, nitondra 20.000 euros ; ary ny iray farany, 20.450 euros. Voatazona izy efatra ireo izao ary mitohy ny fakana am-bavany azy ireo. Tsy misy fanambarana na fahazoan-dalana mazava ny saika hamoahana ireo vola vahiny ireo ho any Nosy Maurice (zotra MK 289), rehefa nanontanian’ny mpanara-maso ao amin’ny ladoany izy ireo. Ny nasehon’izy ireo ny fahazoana mividy izany ihany, izay tsy ampy sy tsy manan-kery amin’ny fomba famoahana azy. Manomboka ahitam-bokatra izao ny fanaraha-maso hentitra ataon’ny ladoany eo amin’ny seranana Ivato. Mila fahaiza-miasa anefa izany, ny fomba fiatrehana sy ny fanadihadiana ireo mpandeha mampiahiahy. Tsy maintsy mivonona amin’izany ny mpiasan’ny fadintseranana ary indrindra fandavana ny kolikoly. Ireo no miantoka ny fahatrarana ireny fanondranana an-tsokosoko ireny. Nanamarika ny ao amin’ny ladoany fa maro ny vola ny vahiny avoaka tsy ara-dalàna amin’izao fotoana tsy maha mafy orina ny toekarena izao. Fanohitra iray farany ny fadintseranana miaro ny toekarena manerana ny sisin-tany rehetra, ka miantso ny Malagasy hifanome tanana hiady amin’ny fanondranana an-tsokosoko ny harem-pirenena. Tsy tokony eo Ivato ihany anefa izany fa manerana ny seranana rehetra, toy ny any amin’ireo seranan-tsambo “malalaka”, famoahan’ny sasany andramena, omby, sokatra, vatosoa… R.MathieuL’article Seranana Ivato: 109.300 euros tratra saika havoaka tsy ara-dalàna a été récupéré chez Newsmada.
Fisandohana teny Tsarasaotra :: Lehilahy tratra nitonona ho inspekteran’ny polisy
Voatazona ao amin’ny fonjakelin’ny polisy, eny amin’ ny Kaomisarian’ny polisy foibe, etsy Tsaralalàna, ny lehilahy iray nisandoka ho polisy. Nilaza ho inspekteran’ ny polisy izy, nandritra ny fandalovany teny Tsarasaotra, afak’omaly. Hoentina eny amin’ny Fampanoavana, anio, ity lehilahy ity. Nosakanan’ny polisy ny mpitondra môtô iray tsy nanao aroloha nandalo teny Tsarasaotra, afak’omaly tolakandro. Voalaza fa saika tsy nety nijanona io mpitondra môtô io sady nilaza fa mahafantatra polisy ka hiantso izany raha tsy avela handeha. “Niantso tamin’ny telefaonina an’ilay havany nolazainy fa polisy io mpitondra môtô io. Tonga teny Tsarasaotra tokoa ny lehilahy iray nanao akanjo ba miloko maitso mitovy amin’ny an’ny Polisim-pirenena. Nilaza ho inspekteran’ ny polisy izy, saingy sarona ny fisandohany andraikitra rehefa nangatahina taminy ny karatra maha polisy azy. Mpamily no asany voasoratra tao amin’ny kara-panondrony ”, araka ny fanampim-panazavana avy amin’ny Polisim-pirenena. Nosamborina avy ha- trany ity mpisoloky. Nogiazana toy ireny môtô tsy manara-dalàna ireny ilay kodiaran-droa. Fantatra fa teny amin’ny fivarotana lamba efa avy nampiasaina na (friperie) no nahitan’ilay lehilahy ny akanjo mitovy amin’ny an’ny mpitandro ny filaminana. L’article Fisandohana teny Tsarasaotra :: Lehilahy tratra nitonona ho inspekteran’ny polisy est apparu en premier sur AoRaha.
Tahan’ny fahantrana: anatiny ny fahasalamana sy ny fanabeazana
Natao, ny 27 sy ny 28 oktobra teo, ny atrikasa nitadiavana ireo singa hamaritana ny tahan’ny fahantrana eto Madagasikara (IPM)*. Atrikasa notohanan’ny Fandaharasan’ny Firenena mikambana momba ny fampandrosoana (Pnud), nandraisan’ny sokajin’olona maro anjara. Maro ireo singa nofaritana amin’izany eto amin’ny firenena, ankoatra ny fahantrana amin’ny vola. Ampidirina anisan’ny IPM, ohatra, ny momba ny raharaham-panjakana, naroson’ny tale jeneralin’ny toekarena ao amin’ny minisiteran’ny Toekarena sy ny vola, Ramiandrisoa Olivier. “Hatramin’izay, noferana ho 1,90 dolara ny fidiram-bola isan’andro farany ambany, isan’olona. Misy olona mahita io vola io, saingy tsy afa-po any amin’ny raharaham-panjakana”.Araka izany, azo amaritana ny tahan’ny fahantrana ireo asam-panjakana ireo, azo ampidirina koa ny tsy fandriampahalemana, zava-misy iainan’ny maro. Koa am-pandinihana izany singa izay ho azo amaritana azy, izay voalohany ny hamoahana izany eto Madagasikara, fa efa namoaka singa iombonana eo amin’izao tontolo izao ny Pnud. Ho an’ny Pnud, tena fahantrana ny mahakasika ny fahasalamana, ny fanabeazana, sy ny fari-piainana.Mahakasika firenena 101 ny tatitra farany navoakan’ny Pnud. Hita tamin’izany fa miisa 1,3 miliara ny olona miaina ao anaty fahantrana. 2/3 amin’ireo, any amin’ny tany an-dalam-pandrosoana, 84 % ny aty amin’ny tapany atsimon’i Afrika. Anisan’ireo 101 ireo i Madagasikara. Ny taona 2012 sy ny 2013 ny nanaovana fanadihadiana farany teto an-toerana. Ity taona 2020 ity no saika nanaovana fanadihadiana manaraka isan-tokantrano eto an-toerana, iarahana amin’ny Banky iraisam-pirenena, saingy tsy tanteraka noho ny Covid-19.R.MathieuL’article Tahan’ny fahantrana: anatiny ny fahasalamana sy ny fanabeazana a été récupéré chez Newsmada.